Taliyeyaasha Maraykanka ma diidi karaan haddii Trump uu bixiyo amar weerar nuyuukleer ah ? | Baligubadlemedia.com
Taliyeyaasha Maraykanka ma diidi karaan haddii Trump uu bixiyo amar weerar nuyuukleer ah ?
Inkasta oo caadi ahaan aysan diidi karin amarka madaxweynaha, haddane taliyeyaasha waxa ay madaxweynaha weeydiisan karaan in uu sharaxaad maangal ah ka bixiyo amarkiisa iyo waxa loogu marmarsoonayo, waxayna fasax u haystaan in ay “maya” ku yiraahdaan haddii amarkaas uu yahay mid sharci darro ah.
Maxay ka dhigantahay tijaabadii ugu dambeysay ee nuyuukleerka Kuuriyada Waqooyi?
“Madaxweynaha amar ayuu bixiyaa, kaas oo hoos u dhaadhaca, fulintana waxaa leh qof hoos jooga, haddii madaxweynaha uu jeneraalada wargaliyo, waxaa ka dhalana hanaan wada tashi oo balaaran, waxbo la’iskama sameeyo meeshan” ayuu intaas ku daray.
“Haddii amarka fulineed uu yahay mid sharci daro ah , waxaad galaysaa xabsi, waxaadna xabsi gali kartaa noloshaada inta ka dhiman” ayuu yiri jeneraalka.
Prof Colangelo waxa uu sheegay in aysan wax habboon ahayn in shaqaalaha darajadooda hooseysa lagu dhiirogaliyo in ay su’aal galiyaan amarka madaxweynaha, haddii kale “heykalka militariga iyo kala sareynta oo dhan ayaa qalqal galaya”.